AHOANA NY FAMETRAHANA PRINTY HP LASERJET 1018 - MPANAO PIRINTY - 2019
Tena Mpanao pirinty
Ahoana ny fametrahana printy HP LaserJet 1018
Ho an'ny olona maoderina rehetra dia zava-dehibe ny maha-voahodidin'ireo antontan-taratasy isan-karazany. Ireo dia ny tatitra, ny fikarohana, ny tatitra sy ny sisa. Ny hafaingo dia tsy mitovy amin'ny olona tsirairay. Saingy misy zavatra iray mampiray ireo olona rehetra ireo - ny filàna mpanonta.
Fametrahana ny printer HP LaserJet 1018
Ireo olona izay mbola tsy nanana raharaham-barotra tamin'ny fitaovana elektronika, ary olona efa za-draharaha, izay, ohatra, tsy manana fiara mpamily, dia mety hiatrika olana mitovy amin'izany. Na izany na tsy izany, ny fomba fitsinjarana ny fanontam-pirinty dia tsotra, ka andeha hojerentsika ny fomba nanaovana izany.
Hatramin'ny HP LaserJet 1018 dia tsotra tsotra ny mpanonta izay afaka mamoaka printy, izay matetika ampy ho an'ny mpampiasa dia tsy hijery fifandraisana hafa. Tsy misy izany.
Voalohany, ampifandraiso amin'ny lohan'ny elektika ilay mpanonta. Noho izany dia mila tady manokana isika, izay tsy maintsy ampidirina ao anaty kitapo miaraka amin'ny fitaovana fototra. Mora ny mamantatra, satria amin'ny lafiny iray dia mifamihina. Tsy misy toerana maro ao amin'ny mpanonta izay ahafahanao manisy tady toy izany, noho izany dia tsy mila famaritana amin'ny antsipiriany ny fandehan-javatra.
Raha vao manomboka ny asany ilay fitaovana, dia azonao atao ny manomboka mampiditra izany amin'ny solosaina. Izany dia hanampy antsika amin'ity USB-cable manokana ity, izay hita ao anatin'ilay kitapo. Tsara ho marihina eto fa ny telegrama misy tsipika dia mifandray amin'ny mpanonta printy, fa tokony hikaroka ilay connecteur USB mahazatra ao ambadiky ny solosaina.
Avy eo, mila mametraka ilay mpamily ianao. Amin'ny lafiny iray, ny rafitra fiara Windows dia afaka maka ny rindrankajy serasera ao amin'ny tahiry ary mamorona fitaovana vaovao. Amin'ny lafiny iray, ny rindrambaiko toy izany avy amin'ny mpanamboatra dia tsara kokoa, satria nomanina manokana ho an'ny mpanonta voatanisa izany. Izany no mahatonga antsika hampiditra ilay disc ary manaraka ny torolalana. Fanampim-panaovana fametrahana.
Raha toa ka tsy manana rakitra miaraka amin'ny rindrambaiko toy izany ianao, ary ilaina ny mpanamboatra kalitao ho an'ny mpanonta printy, dia azonao atao foana ny miantso ny tranonkala ofisialin'ny mpamorona ho fanampiana.
Aorian'ny dingana etsy ambony, ny mpanonta dia vonona amin'ny asa ary azo ampiasaina. Tsy misy afa-tsy ny mandeha any amin'ny sakafo "Atombohy"mifidy "Fitaovana sy fanontam-pirinty", tadiavo ny marika miaraka amin'ny endriky ny fitaovana natsangana. Tsindrio eo amin'ny bokotra ankavanana ary mifidiana "Fitaovana Default". Ankehitriny, ireo antontan-taratasy rehetra alefa amin'ny pirinty, dia hiditra ao anaty milina vaovao iray vaovao.
Vokatr'izany dia afaka miteny isika fa tsy manelingelina ny fametrahana fitaovana toy izany. Ampy hanaovana ny zava-drehetra ao anatin'ny fizotra marina ary manana ny antsipiriany ny antsipirihany ilaina.
https://termotools.com mg.termotools.com © Mpanao pirinty 2019